ချစားနေသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကြီး အကြောင်း.. ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာဗျာ - Tameelay
ချစားနေသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကြီး အကြောင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးအရလွှတ်တော်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူလွှတ်တော်အား တိုင်းကြားခြင်း
ရန်ကုန်အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေဆိပ် Terminal 1 တွင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော အကြီးစား ချစားမှုများ…
နံနက် ၈နာရီ မလေးရှားလေယာဉ် ဆင်းသည့်အချိန်မှ စ၍ ညသန်းခေါင် ၂ နာရီ ကိုရီယားလေယာဉ် ဆိုက်သည့်အချိန်ထိ
အောက်ဖော်ပြပုံတွေထဲက လူများဟာ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်စွာ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် Therminal 1 ကိုကြီးစိုးလို့နေပါတယ်။ နေ့ဘက်တွေမှာ နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတဲ့ မိမိနိုင်ငံသားတွေကို အတင်းဆွဲခေါ်အတင် ဈေးနှိမ်ပြီး မှောင်ခိုငွေကြေးလဲလှယ်နေပါသည်။
ထိုနည်းတူစွာ အငှါးယာဉ်မောင်းသမားများကလည်း မိမိနိုင်ငံကို အလည်အရောက်လာလည်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည့်တွေကို အတင်း ကားငှါးမလား အတင်းပြောဆိုနေသည်မှာ နိုင်ငံတော်ဂုဏ်သိက္ခာ ညိုးနွမ်းစေပါတယ်။ လေဆိပ်မှ ၈မိုင်လောက် ခရီးတိုလေးကို USD 15 $ တောင်းခံလျက်ရှိပါသည်။ ဒါအပြင် Arrival ထဲတွင် ရှိသော Money Exchanges counter တွေ ဖုန်းဆင်းကဒ် ဆက်သွယ်ရေး ကောင်တာတွေ စတဲ့ ကောင်တာတွေရဲ့ရှေ့မှာ သူတို့ ခရီးသည်ရဖို့အရေး အဓမ္မ ဗိုလ်ကြစိုးမိုးနေပါတယ်။
***** အောက်မှာ ပုံပြထားပါတယ်
ခရီးသည်တစ်ဦးက Ooredoo ကောင်တာမှာ ဆင်းကဒ်လာဝယ်တာပါ ဆိုင်မှာရှိသော ကောင်မလေးကလာဝယ်တဲ့ သူရဲ့customer က အကူအညီတောင်းလို့ တခြား taxi ငှါးပေးတာကို taxi သမားတစ်ဦးက သူအားကားငှါးအောင်မပြောပေးလို့ဆိုပြီး လေဆိပ် အပြင်ထွက်တာနဲ့ ကားနဲ့တိုက်သတ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ပါတယ်။
ဒီလူတွေ ဘာလို့ အခုလို လုပ်လို့ရလည်း သိလား
သူတို့ အဖွဲ့ အမည်က အုတ်နီခဲ အဖွဲ့တဲ့ ဂိတ်နံပါတ် ၆ မှာ တာဝန် ကျသော ရဲကို မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ တစ်ဦးကို ပိုက်ဆံ ၃၀၀၀ ကျပ် ကောက်ခံပြီး လာဘ်ထိုးထားတယ် (ဆက်ကြေး) ပေးတာပေါ့….
ရဲက လူကြီးလာစစ်ရင် ခဏရှောင်ခိုင်းထားတယ်…
အကြီးစား ချစားမှု ကြီးပါ…..
ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရ လွှတ်တော် ဘာလုပ်မလည်း ပြည်သူတွေ မျှော်လင့်ထားတဲ့ အစိုးရ တစ်ရပ်လား ကြည့်ပါမယ်
လက်ပေးလက်ယူမှုပုံတွေ cctv မှတ်တမ်းတွေ အားလုံးကို မီဒီယာကို ချပြခြင်ပါတယ် နိုင်ငံတော် ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်မှာစိုး၍ မတက်ပြတာပါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်လည်းဖြစ်နေပါတယ်…
လေဆိပ် ရဲတွေ မိမိနိုင်ငံလေဆိပ်ကို လုံခြုံအောင် ထားရဲ့လား
သစ္စာအဓိဌာန်ဆိုထားတဲ့ ပြည်သူ့ရဲတွေနော် သစ္စာစူးမယ်
အလုပ်လုပ်ကြပါ လေဆိပ်ပြည်သူ့ရဲများ အားနေရင် ချစားဖို့ကြီး လုပ်မနေပါနဲ့. လေဆိပ်ထဲက အရောင်းကောင်တာမှာရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အသက်တွေပါတော့မယ် ခင်များတို့. အမေတွေ ညီမတွေပါမှ ထပြီးအလုပ်မလုပ်ကြနဲ့
Credit – yawthama
ခစြားနသေော မွနျမာနိုငျငံ၏ ရနျကုနျအပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျကွီး အကွောငျး
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး အစိုးအရလှတျတျောနှငျ့တိုငျးဒသေကွီးပွညျသူလှတျတျောအား တိုငျးကွားခွငျး
ရနျကုနျအပွညျပွညျ ဆိုငျရာလဆေိပျ Terminal 1 တှငျ ဖွဈပျေါလကျြရှိသော အကွီးစား ခစြားမှုမြား…
နံနကျ ၈နာရီ မလေးရှားလယောဉျ ဆငျးသညျ့အခြိနျမှ စ၍ ညသနျးခေါငျ ၂ နာရီ ကိုရီယားလယောဉျ ဆိုကျသညျ့အခြိနျထိ
အောကျဖျောပွပုံတှထေဲက လူမြားဟာ မငျးမဲ့စရိုကျဆနျစှာ ရနျကုနျအပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျ Therminal 1 ကိုကွီးစိုးလို့နပေါတယျ။ နဘေ့ကျတှမှော နိုငျငံခွားက ပွနျလာတဲ့ မိမိနိုငျငံသားတှကေို အတငျးဆှဲချေါအတငျ စြေးနှိမျပွီး မှောငျခိုငှကွေေးလဲလှယျနပေါသညျ။ ထိုနညျးတူစှာ အငှါးယာဉျမောငျးသမားမြားကလညျး မိမိနိုငျငံကို အလညျအရောကျလာလညျတဲ့ နိုငျငံခွားသားဧညျ့သညျ့တှကေို အတငျး ကားငှါးမလား အတငျးပွောဆိုနသေညျမှာ နိုငျငံတျောဂုဏျသိက်ခာ ညိုးနှမျးစပေါတယျ။ လဆေိပျမှ ၈မိုငျလောကျ ခရီးတိုလေးကို USD 15 $ တောငျးခံလကျြရှိပါသညျ။ ဒါအပွငျ Arrival ထဲတှငျ ရှိသော Money Exchanges counter တှေ ဖုနျးဆငျးကဒျ ဆကျသှယျရေး ကောငျတာတှေ စတဲ့ ကောငျတာတှရေဲ့ရှမှေ့ာ သူတို့ ခရီးသညျရဖို့အရေး အဓမ်မ ဗိုလျကွစိုးမိုးနပေါတယျ။
***** အောကျမှာ ပုံပွထားပါတယျ
ခရီးသညျတဈဦးက Ooredoo ကောငျတာမှာ ဆငျးကဒျလာဝယျတာပါ ဆိုငျမှာရှိသော ကောငျမလေးကလာဝယျတဲ့ သူရဲ့customer က အကူအညီတောငျးလို့ တခွား taxi ငှါးပေးတာကို taxi သမားတဈဦးက သူအားကားငှါးအောငျမပွောပေးလို့ဆိုပွီး လဆေိပျ အပွငျထှကျတာနဲ့ ကားနဲ့တိုကျသတျမညျဟု ခွိမျးခွောကျပါတယျ။
ဒီလူတှေ ဘာလို့ အခုလို လုပျလို့ရလညျး သိလား
သူတို့ အဖှဲ့ အမညျက အုတျနီခဲ အဖှဲ့တဲ့ ဂိတျနံပါတျ ၆ မှာ တာဝနျ ကသြော ရဲကို မနကျမိုးလငျးတာနဲ့ တဈဦးကို ပိုကျဆံ ၃၀၀၀ ကပျြ ကောကျခံပွီး လာဘျထိုးထားတယျ (ဆကျကွေး) ပေးတာပေါ့….
ရဲက လူကွီးလာစဈရငျ ခဏရှောငျခိုငျးထားတယျ…
အကွီးစား ခစြားမှု ကွီးပါ…..
ရနျကုနျတိုငျး အစိုးရ လှတျတျော ဘာလုပျမလညျး ပွညျသူတှေ မြှျောလငျ့ထားတဲ့ အစိုးရ တဈရပျလား ကွညျ့ပါမယျ
လကျပေးလကျယူမှုပုံတှေ cctv မှတျတမျးတှေ အားလုံးကို မီဒီယာကို ခပြွခွငျပါတယျ နိုငျငံတျော ဂုဏျသိက်ခာထိခိုကျမှာစိုး၍ မတကျပွတာပါ အပွညျပွညျဆိုငျရာ လဆေိပျလညျးဖွဈနပေါတယျ…
လဆေိပျ ရဲတှေ မိမိနိုငျငံလဆေိပျကို လုံခွုံအောငျ ထားရဲ့လား
သစ်စာအဓိဌာနျဆိုထားတဲ့ ပွညျသူ့ရဲတှနေျော သစ်စာစူးမယျ
အလုပျလုပျကွပါ လဆေိပျပွညျသူ့ရဲမြား အားနရေငျ ခစြားဖို့ကွီး လုပျမနပေါနဲ့. လဆေိပျထဲက အရောငျးကောငျတာမှာရှိတဲ့ ဝနျထမျးတှရေဲ့ အသကျတှပေါတော့မယျ ခငျမြားတို့. အမတှေေ ညီမတှပေါမှ ထပွီးအလုပျမလုပျကွနဲ့
၀မ်းလည်းနည်း ဒေါသတွေလည်း ဖြစ်လွန်းလို့ ဒီပို့စ်ကို ကျွန်မ တင်ပါရစေ…
၀မ်းလည်းနည်း ဒေါသတွေလည်း ဖြစ်လွန်းလို့ ဒီပို့စ်ကို ကျွန်မ တင်ပါရစေ… ကျွန်​မဒီ​နေ့အဖြစ်​အပျက်​​လေးတစ်​ခုကို Post တင်​ပါ​စေ ဝမ်းလဲနည်းတယ်​​ဒေါသလဲဖြစ်​ခဲ့ရတယ်​ ကျွန်​မဒီ​နေ့လှည်းတန်းကိုပစ္စည်းသွားပို့တယ်​ လှည်းတန်းမီးပွိုင့်​မှာမီးနီ​တော့ကားရပ်​တာကျွန်​မကားကထိပ်​ဆုံးကား​ပေါ့အဲဒါနဲ့​ဘေးဘက်​ပလက်​​ဖောင်းကိုကြည့်​လိုက်​​တော့အခုပုံပါက​လေးမကို​တွေ့တယ်​​ အဲဒါနဲ့မိုးကလဲရွာ​နေတယ်​သူ​ဘေးမှာလဲထီးပါရဲ့သားနဲ့ ထီးကိုမ​ဆောင်းဘူးကျွန်​မမ​နေနိုင်​​တော့ဘူးအရမ်း​ပြောချင်​ လာတယ်​ ကိုယ့်​ရဲ့အိမ်​ထဲမှာ​ခွေး​တွေ​ကြောင်​​တွေ​တောင်​မိုးရွာ​နေရင်​​နွေး​နွေး​ထွေး​ထွေးထားတာအိမ်​ကသမီး​တွေ ကြောင်​​တွေ​ခွေး​တွေကို ကျွန်​မလို့ဂရုမစိုက်​ရင်​ ကျွန်​မ​ပြော​နေကြစကားတစ်​ခုရှိတယ်​ သူတို့မှာလဲအသက်​ရှိတယ်​လို ကျွန်​မရဲ့​ရှေ့မှာကိုယ်​ချင်းစာနာမူကင်းရင်​ အရမ်း​ဒေါသထွက်​တက်​တဲ့ ကျွန်​မရဲ့စရိုက်​တစ်​ခုပါ အဲဒါနဲ့ ဟဲ့က​လေးမမိုရွာ​နေတာ …
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ နားလည်နိုင်မှုကို သင်ခဏခဏ မစမ်းသပ်ပါနဲ့ သူနားမလည်နိုင်တော့တဲ့အချိန်ရောက်ရင် သင် ရှင်းပြခွင့်တောင် ရလိမ့်မယ် မထင်နဲ့ မိန်းမတွေရဲ့ နှလုံးသားက ဖယောင်းချက်နဲ့ ပုံဖော်ထားတဲ့ ဖယောင်းရုပ်တစ်ခုလိုပါပဲ နှူးညံခြင်းပြီးရင် မာကြောတတ်လာကြတယ် ချစ်တယ်ပြောပြီး ပစ်ထားခံရတဲ့အချိန်များလာရင် လွမ်းတယ်ပြောပြီး လျစ်လျူရှူထားတဲ့အချိန်များလာခဲ့ရင် ခမ်းခြောက်သွားတဲ့ မျက်ရည်စတွေကြား သူမရင့််ကျက်သွားခဲ့ရင် အရင်ကလို သင်ရဲ့ဂရုစိုက်မှုကိုလိုအပ်တော့မှာ …